Masinina Groove Type Compost Turner Machine ho an'ny mpamatsy ny fako sy ny fiompiana | YiZheng
Inona ilay masinina Groove Type Composting Turner?
Turner Composting Type Groove Masinina no milina fanamasinana aerobika be mpampiasa sy fitaovana fanodinana compost. Ahitana talantalana, lalan-tongotra, fitaovana fanangonana herinaratra, fanodinana ampahany ary fitaovana famindrana (ampiasaina indrindra amin'ny asa maro-tanky). Ny ampahany miasa amin'ny masinina compost turner dia mandray ny fampitana roller efa mandroso, izay azo akarina ary tsy azo esorina. Ny karazana azo entina dia ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny asa miaraka amin'ny sakany mihodina tsy mihoatra ny 5 metatra ary ny halalin'ny fihodinana tsy mihoatra ny 1.3 metatra.
Inona no ampiasaina amin'ny Groove Type Compost Turner?
(1) Turner composting karazana haavo ampiasaina amin'ny fanamasinana ny fako biolojika toy ny fiompiana sy ny vorona akoho amam-borona, dumpling sludge, fotaka sivana zavamaniry siramamy, sakafo mofom-pasika ary fotaka famoahana mololo.
(2) Avadiho ary esory ny fitaovana ao anaty tanky fitobiana ary miverina milalao ny vokatry ny fihodinana haingana ary koa ny fikoropahana, mba hahitana fifandraisana feno eo anelanelan'ny fitaovana sy ny rivotra, mba ho tsara kokoa ny vokatra fermentation an'ny fitaovana.
(3) Turner composting karazana haavo no fitaovana fototra amin'ny fananganana composting dynamique. Io ny vokatra mahazatra izay misy fiatraikany amin'ny firoboroboan'ny indostrian'ny compost.
Ny maha-zava-dehibe ny Turner composting karazana haavo avy amin'ny anjara asany amin'ny famokarana zezika:
1. Fampifangaroana ny asan'ny akora samihafa
Amin'ny famokarana zezika dia tsy maintsy ampiana fitaovana fanampiana vitsivitsy hanitsiana ny tahan'ny karbaona-azota, ny PH ary ny atin'ny rano amin'ny akora. Ny akora fototra sy ny kojakoja mifangaro izay mifangaro miaraka, ny tanjon'ny fampifangaroana akora amin'ny akora samy hafa dia azo tanterahina rehefa mihodina.
2. Ampifanaraho ny hafanan'ny antontam-bokatra.
Ny rivotra madio be dia be azo entina ary hifandraisana tanteraka amin'ireo akora ao anaty antontan-taratasy mifangaro, izay afaka manampy ny zavamiaina bitika aerobika hamokatra hafanana mitombo sy hampitombo ny hafanan'ny antontam-bato, ary ny hafanan'ny antontam-baravarana dia mety hampangatsiaka amin'ny famenoana tsy tapaka ny vaovao rivotra. Ka izany dia miendrika fifandimbiasan'ny mari-pana-maripana-mari-pana-hafanana, ary ny bakteria mikraoba mahasoa isan-karazany maniry sy miteraka haingana amin'ny vanim-potoana maripana.
3. Hatsarao ny fitrangan'ny korontam-bary.
ny turner composting karazana groove afaka manodina ny fitaovana ho faribolana kely kokoa, manao ny antontan'isa ho matevina sy matevina, malefaka sy elastika, mamorona porosity mety eo anelanelan'ny fitaovana.
4. Amboary ny hamandoan'ny antontam-bokatra.
Ny votoatin'ny hamandoana azo avy amin'ny fermentation ny akora dia manodidina ny 55%. Amin'ny fanamasinana ny fiasan'ny fihodinana, ny fihetsika biokimika mavitrika amin'ny zavamiaina bitika aerobika dia hiteraka hamandoana vaovao, ary ny fihinanana kojakoja amin'ny alàlan'ny zavamiaina bitika oksizenina koa dia hahatonga ny rano ho very ny mpitatitra ary afaka. Noho izany, miaraka amin'ny fizotran'ny zezika, hihena ara-potoana ny rano. Ankoatry ny etona miforona amin'ny alàlan'ny fanodinana hafanana, ny akora miodina dia hamorona etona etona rano tsy maintsy atao.
Fampiharana ny milina Turner Composting Turner Groove
1. Ampiasaina amin'ny fanamasinana sy fanalana rano amin'ny zavamaniry zezika organika, zavamaniry zezika mitambatra, ozinina maloto, fambolena zaridaina ary fambolena holatra.
2. Mety amin'ny fermentation aerobic, azo ampiasaina miaraka amin'ny efi-tsoratry ny masoandro, tanky fermentation ary shifters.
3. Ny vokatra azo avy amin'ny fanamasinana aerobika maripana avo lenta dia azo ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tany, ny fambolena zaridaina, ny fanotofana tany, sns.
Antony lehibe hifehezana ny fahamatoran'ny zezika
1. Fanaraha-maso ny tahan'ny karbaona-azota (C / N)
Ny C / N mety amin'ny famotehana ny zavatra biolojika amin'ny zavamiaina bitika ankapobeny dia manodidina ny 25: 1.
2. Fanaraha-maso ny rano
Ny fanivanan'ny rano ny zezika amin'ny tena famokarana dia fehezina amin'ny 50% ~ 65%.
3. Fanaraha-maso ny rivotra
Ny famatsiana oksizenina entona dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny zezika. Inoana amin'ny ankapobeny fa ny oksizenina ao amin'ny antontam-bato dia mety amin'ny 8% ~ 18%.
Ny mari-pana dia singa iray manan-danja amin'ny fiasa miadana amin'ny zavamiaina bitika. Ny hafanan'ny fermentation an'ny compost maripana ambony dia 50-65 degre C, izay fomba fampiasa matetika indrindra ankehitriny.
5. Fanaraha-maso ny masirasiran'ny asidra (PH)
PH dia singa iray lehibe manimba ny fitomboan'ny zavamiaina bitika. PH ny fangaro amin'ny kompôty dia tokony ho 6-9.
6. Fanaraha-maso maimbo
Amin'izao fotoana izao, zavamiaina bitika bebe kokoa no ampiasaina hanalefahana.
Tombony azo amin'ny milina turner Composting Turner
(1) Ny tanky fermentation dia azo esorina mitohy na amin'ny ankapobeny.
(2) Fahombiazana avo lenta, fandidiana malefaka, matanjaka sy mateza.
Fampisehoana horonantsary mikraoba karazana Groove
Safidy modely Turner Composting Turner
Haingam-pandeha （m / min）
Fahafahana (m3 / h)
Teo aloha: Fitaovana fanjonoana fermentation sinoa ambongadiny - Masinina fanodinam-bokatra composting-YiZheng
Manaraka: Fivarotana lozisialy lovia rojo